24. स्वतन्त्रता र खुल्ला समाजका लागी शिक्षा निति
You are at Home Podcast 24. स्वतन्त्रता र खुल्ला समाजका लागी शिक्षा निति
शिक्षा पद्धतिको प्रत्याभूति सरकारले दिनुपर्छ । शिक्षा नीति व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्राथामिकतामा राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने नीतिको आवश्यकता छ । सही शिक्षा प्राप्तीका लागि प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि समाजको विकासमा शिक्षा र शिक्षालयको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ ।
विद्यार्थीहरुका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आर्थीक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका विषयमा जानकार हुने विषयवस्तु शैक्षिक पठनपाठनमा समाहित हुनुपर्छ । यी लगायतका विषयमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य प्रध्यापक डा. विद्यानाथ कोईरालासंग फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारीले गरेको कुराकानी |